Fanlyplas-Dedicated kune epurasitiki firimu uye pepa extrusion mutsara mhinduro
:: export @fanlyplas.com
Fanlyplas! Wedzera ramangwana rako！
Nemakumi emakore ekugadzirwa kwekutanga, Fanlyplas kuchengeta inovandudza yakakwira-kumagumo, yakaderera simba rekushandisa, yakakwira kuburitsa, yakagadzikana kugadzirwa kwepurasitiki firimu, jira uye chimiro extrusion mutsetse.
Tinokugamuchirai Kunzira nyika FANLYPLAS extrusion tekinoroji!
Fanlyplas-Dedicated kune epurasitiki firimu uye pepa extrusion mutsara mhinduro.
Nemakore ekuvandudza uye anogara achivandudza AZ sevhisi. Fanlyplas inokwanisa kukupa yakakwana package solution muPurasitiki jira, foil profile extrusion mutsara.
Fanlyplas, inowanikwa Shanghai, China. iri kuve inoshanda mumusika wepasirese wenyika dzinopfuura gumi.
Fekitori yekambani yedu yekugadzira base inovhara nzvimbo inosvika zviuru zvitanhatu zvemamirimita.
We dzidzira kugadzirwa epurasitiki michini kugadzirwa mitsetse, pamwe wepagore goho ukoshi mamiriyoni mashanu emadhora US.
Nyika dzinopfuura gumi nepfumbamwe dzakashandisa zvigadzirwa zvedu uye dzakagamuchira masevhisi edu.
Kubva pakagadzwa makore gumi nematanhatu apfuura, iyo kambani mune jira uye firimu extrusion mutsetse kunyanya mune furo zvigadzirwa.
PVC Edge Bhendi Extrusion mutsetse
PVC Ceiling Panel Extrusion mutsetse
PP/PE WPC decking Extrusion mutsetse
PVC WPC Musuo Furemu Yekuwedzera Line
PVC yemahara furo jira extrusion mutsara
PVC/WPC Furo Bhodhi Kuwedzeredza Mutsara
SPC flooring jira extrusion mutsara
PVC machena jira extrusion mutsetse
Fanlyplas-Yako Plastic Extrusion mhinduro Sarudzo Kuti uwane kuita kwakanaka uye mhedzisiro.
Muchina wedu unogona kuburitsa pepa repurasitiki, firimu uye ma profiles ayo anoshandiswa mukati nekunze kushongedza nzvimbo, kuvaka zvinhu indasitiri, signage zvinhu indasitiri, package zvinhu indasitiri, chemakemikari indasitiri uye yepamusoro-kumagumo zvigadzirwa zvemagetsi, huremu hushoma uye yakakwirira simba zvigadzirwa.
Kuongorora Chii Fanlyplas chipo
Batsira vatengi mukuongorora kugona kweprojekti, kusarudzwa kwenzvimbo, zviyero, dhizaini, nezvimwe.
Zvinoenderana nechirongwa ichi, batsira vatengi kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kusvika pakuiswa uye kugamuchirwa
Batsira vatengi mukugadzira zvirongwa uye madhirowa anosangana nezvinangwa zvavo uye zvirongwa.
Govera iko kurovedzwa kwemuchina kushanda, kugadzirisa, kugadzirisa matambudziko, nezvimwe kune vashandi vevatengi.
Simbisa chirongwa chekupedzisira uye ruzivo maererano nemamiriro ezvinhu akakwana evatengi
Ipai vatengi "yemhando yepamusoro, inokurumidza, uye yakasarudzika" basa rehupenyu hwese.
Zvakanakisa Zvakanakira vatengi vedu
Bvisa zvinodiwa nevatengi kubatsira vatengi kuronga yakanyatsokodzera kuronga fekitori uye kuronga hurongwa.
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi zvekugadzira, isu tinopa vatengi iyo yakanakisa yekugadzirisa hurongwa.
Ipai vatengi nehunyanzvi masevhisi ekugadzira zvigadzirwa uye mafomula
Dzazvino Blog & Zvinyorwa
Pe / PP Kunze WPC Machina / Midziyo / Extrusion Kugadzira Line
Zviri Mukati WPC Chigadzirwa Nhanganyaya Zvakanakira WPC Zvinyorwa zveMusika Zvitarisiko zve WPC Kushandiswa kwe WPC Zvekunze Zvinyorwa WPC Kugadzira Maitiro Kugadzira Mutsetse Mashandiro Ekushandisa Kuisikidza uye Commissioning
Kuongorora uye Kukakavara kweZvinowanzoitika Zvikonzero zveCell Broken ye PVC Skinning furo bhodhi
Chikamu chemuchinjikwa chefuro repurasitiki chakaputswa kana kupinda mukati memasero. Mune dzidziso, ine zvinhu zviviri zvakakosha: Chekutanga, nekuti simba remuno rekunyungudika pacharo zvakare
Nheyo uye Kushanda kweRigid PVC Furo Plastic
Furo epurasitiki mhando yepolymer zvinhu zvakaumbwa nenhamba yakawanda yemagero micropores akapararira mupurasitiki yakasimba, uye ane hunhu hwehuremu huremu, kupisa kupisa, kurira
Pfungwa Nhanhatu Dzinoenderana PVC Furo Bhodhi Kugadziriswa
Iko kugadzirisa maitiro e PVC furo bhodhi rakangofanana neiro rekugadzira huni. Izvo zvinongofanirwa kudzivirira kupisa kunokonzerwa nekunyanyisa kukwirira kushanda tembiricha. In
Tora mhinduro dzekuwedzera kana sevhisi nhasi
Tinoda kuda kunzwa kubva kwauri! Titumire meseji tichishandisa fomu rakatarisana, kana isu email. Tinoda kuda kunzwa kubva kwauri! Titumire meseji uchishandisa fomu pazasi.
Mbiri Yekuwedzera Line
Firimu, Sheet extrusion Line
:Aihwa. 28, Moyu Road, Jiading Dunhu, Shanghai, China
:: + 86 21 69895995
FANLYPLAS Chiratidzo che FANLYPLAS SHANGHAI CO., LTD
Automated peji kumhanya optimizations yekukurumidza saiti kuita